Mo3AlC2 inhengo yeiyo vdW MAX yakarongedzwa zvinhu system. Zvakafanana ne graphite uye MoS2, iyo MAX chikamu chakamisikidzwa, uye fomula yakajairwa ndeye Mn + 1AXn, (MAX), uko n = 1 ~ 3, M ndiyo yekutanga shanduko yesimbi, A ndiyo isiri metallic element, uye X kabhoni uye / kana nitrogen. Mune ino chaiyo kesi, M = Mo, A = Al, X = C, n = 2.
Mo3AlC2 inhengo yeiyo vdW MAX yakarongedzwa zvinhu system. Zvakafanana ne graphite uye MoS2, iyo MAX chikamu chakamisikidzwa, uye fomula yakajairwa ndeye Mn + 1AXn, (MAX), uko n = 1 ~ 3, M ndiyo yekutanga shanduko yesimbi, A ndiyo isiri metallic element, uye X kabhoni uye / kana nitrogen. Mune ino kesi yakasarudzika, M = Mo, A = Al, X = C, n = 2.
Mo3AlC2 MAX chikamu chikamu chakadzvanywa MAX chikamu. Nekuda kwehunhu hwekubatana kwesimbi, chikamu chakakura ndechekuitisa uye kupisa kupisa. Iwo akanakisa ekutsvagisa mhando zvinhu senge 2d simbi, bhatiri kunyorera, metamaterials, thermophysics, kana sevamiriri veMXene kugadzirwa. Kugadzirwa kwedu kwemolybdenum nealuminium carbide kwakasvika pa3: 1: 2 Mo: Al: C garandi chiyero, uye yakaratidza kunoshamisa kugadzikana kwezvakatipoteredza.
Pashure: Aluminium vanadium Carbide, V2AlC
Zvadaro: Aluminium titanium carbide, Ti3AlC2
Molybdenum Aluminium Carbidhi
Molybdenum Aluminium Carbide Mafekitori
Molybdenum Aluminium Carbide Fekitori
Molybdenum Aluminium Carbide Mugadziri
Molybdenum Aluminium Carbide Vagadziri
Molybdenum aruminiyamu carbide upfu
Molybdenum Aluminium Carbide Mutengo
Molybdenum Aluminium Carbide Makotesheni
Yakachena Molybdenum Aluminium Carbide